Izimangalo Zemikhiqizo Engaphelele / Imithi | Izinkampani Zomthetho eDubai
Izimangalo Zokukhubazeka / Imithi
Zonke izinhlobo zemikhiqizo, kusukela ezintweni zasendlini, amathoyizi, amathuluzi, izimoto nemishini yezimboni kufanele zenziwe futhi zikhiqizwe ngendlela ephephile. Umenzi kufanele akhombe zonke izingozi ezibonakalayo.
Imithi Engalungile Nemikhiqizo Yezemithi
ummeli wokulimala komuntu ukukusiza uphishekele umkhiqizo onenkinga noma isimangalo somuthi.
Lezi zingozi kumele zixwayiswe ngazo, zigadwe futhi zakhiwe kude. Kepha, uma uhlushwa ukulimala ngenxa yomkhiqizo noma umuthi, ungakhuluma nommeli wokulimala komuntu siqu ukukusiza uphishekele isimangalo somkhiqizo esingenaphutha noma isimangalo somuthi.
Njalo ngonyaka, izigidi zemithi ebhalwe phansi ibhalelwa ukusiza ukunciphisa noma ukwelapha imiphumela yesifo noma yokugula. Ngenkathi imikhiqizo eminingi yemithi kanye nemithi isebenza ngempumelelo futhi iphephile, le mikhiqizo isengalimaza abasebenzisi. Esikhathini esiningi, izinkampani zezidakamizwa zibeka phambili amasheya wazo kanye nenzuzo ngokuphepha kweziguli.
Abantu abaningi bayehluleka ukucwaninga ngemithi abayinikezwe odokotela babo. Abantu akuvamile ukuthi bacabange ukuthi udokotela obekelwe izidakamizwa ngeke abalimaze. Kepha, eminyakeni embalwa edlule, izidakamizwa ezahlukahlukene zikhombisa ukubaluleka kokuthola ukuthi yimiphi imithi oyifaka ohlelweni lwakho. Umuthi okhethekile onenkinga yokuthi umsolwa angasiza izisulu zemithi eyingozi kadokotela. Ngomthetho ophumelelayo wokulwa namaphutha emithi, ungathola isinxephezelo ngezindleko zemithi kadokotela, izikweletu ezelashwa kanye nokunye ukulahleka okulahlekile ngenxa yomuthi oyingozi.
Izinhlobo Zokukhubazeka Komkhiqizo
Kunezinhlobo ezintathu zezinkinga emikhiqizweni eyenza isimangalo somkhiqizo womkhiqizo:
Izinkinga zokuklama zenzeka lapho umkhiqizo unesakhiwo esinephutha esidale ukulimala kwakho. Kusetshenziswa izindinganiso ezimbili ukuthola iziphambeko zomklamo, okungukuthi indinganiso yokusebenzisa ubungozi kanye nezindinganiso ezilindelwe abathengi. Izinga lokulindelwa kwabathengi linokuthile mayelana nokuthi umkhiqizo awuphile kanjani ukulindelwe ngumthengi. Okwamanje, indinganiso esetshenziswa ebungozini ibhekana nokuthi ukusetshenziswa komkhiqizo kudlule izingozi zokuwusebenzisa noma cha.
Izexwayiso ezinganele emikhiqizweni yilapho imikhiqizo yehluleka khona ukuxwayisa ngokunembile abathengi ngobungozi obukhona nobungozi obukhona ekusetshenzisweni kwabo. Isibonelo, iladi osanda kulithenga lalingenasici sokukhiqiza kodwa alizange likuxwayise ngomkhawulo wesisindo salo, elenza liphule lapho ubeka ibhokisi elikhulu eshalofini eliphakeme.
Izinkinga zokukhiqiza zihlukile ngandlela thile njengoba umkhiqizo ungafaka umklamo ozwakalayo kepha onephutha ngenxa yephutha lokukhiqiza. Isibonelo, iningi lezitebhisi ezenziwa yinkampani lingahle lisebenze kahle kodwa ileli oyithengile laphula futhi lakwenza wehla ngenxa yokugqwala okunganamatheli. Ezimweni ezinjalo, ukwakheka komkhiqizo akulona iphutha kepha bekuyiphutha lokukhiqiza esikhundleni salokho.
Umkhiqizo onamaphutha noma umuthi
Umkhiqizo onenkinga noma umkhiqizo uthi ummeli unesipiliyoni esidingekayo sokukusiza ukuthi uxoxisane ngezindawo zokuhlala nezinkampani zomshuwalense kanye namanye amaqembu akho. Abameli laba futhi bangabameli bezokuvivinya abanolwazi ngokwazi ukuthi bangakumelwa kanjani kangcono ngesikhathi secala lakho lesikweletu somkhiqizo lapho liqulwa ngendlela enolaka kakhulu. Bazokuchazela nazo zonke izinketho zakho zomthetho, ukukuqondisa ngesikhathi senqubo yezomthetho futhi basebenze kanzima ukuxazulula izinkinga zakho zezomthetho.
Siphatha zonke izici zecala lakho
Uma ngabe uhlukumezekile ngenxa yokusetshenziswa kwesidakamizwa somuthi, ungahle ube nesicelo semikhiqizo enephutha. Udinga ukwelulekwa ngummeli onolwazi lokulimala komuntu siqu.